”Fabregas ma siin karo damaanad uu kusii joogo” – Conte – Gool FM
”Fabregas ma siin karo damaanad uu kusii joogo” – Conte
(London) 13 Dis 2016 – Antonio Conte ayaan “damaanad qaadi karin” in laacibka ay bartilmaameedsanayaan AC Milan iyo AS Roma ee Cesc Fabregas uu sii joogayo Chelsea kaddib bisha Jannaayo.
Laacibkan reer Spaniard ayaan si joogto ah ugasoo muuqanin shaxda macallinkii hore ee Talyaaniga tan iyo markii uu yimid Stamford Bridge, waxaana muddo lala xiriirinayaa kooxda Rossoneri, waloow dhowaanahan ay hardanka soo gashay Roma oo doonaysa inay ku darto heshiiska Antonio Rudiger ama Radja Nainggolan oo ay Chelsea doonayso.
“Miyaan damaanad qaadi karaa joogista Fabregas?” ayuu Conte ka fikirey mar uu ka hadlayay shirkii jaraa’id ee maanta.
“Kubadda cagta, khibradayda markii aan eego way adag tahay in damaanad la bixiyo. Cesc waa laacib muhim ah oo ka dhex muuqdey kulankii Man City iyo ciyaartii ugu dambaysay [West Bromwich Albion] wuu soo galay wuuna dadaaley oo shaqo fiican buu qabtay.” ayuu raaciyay.
XULKA SERIE A: Waa kuwee 11-ka xiddig ee todobaadkan ugu fiicnaa horyaalka Talyaaniga?
''Ujeedkeennu waa inaan Inter Milan ka dhignaa kooxda ugu wanaagsan adduunka'' - Zhang